Ny sidina tsy miato dia miverina avy any Munich mankany Tunis sy Edinburgh
Home » Vaovaon'ny seranam-piaramanidina » Ny sidina tsy miato dia miverina avy any Munich mankany Tunis sy Edinburgh
Jolay 30, 2020
Vonona ny hiala any amin'ny làlan'i Afrika Avaratra? miaraka Tunisair, sidina iray hafa no miainga avy ao amin'ny seranam-piaramanidina Munich.
Ny sidina nasionaly Toniziana dia hisidina indray avy any Munich mankany renivohitr'i Tunis intelo isan-kerinandro amin'ny Alatsinainy, Alarobia ary Zoma. Airbus A319, A320, na fiaramanidina Boeing 737 no hampiasaina.
Ankoatr'i Tunis, toerana iray hafa tiana no hotompoina imbetsaka isan-kerinandro: Easyjet dia manohy ny sidina mankany Edinburgh. Ny zotram-piaramanidina dia hisidina mankamin'ny tanàna lehibe any Skotika isaky ny talata sy alakamisy alina amin'ny 9:50 hariva ary ny asabotsy tolakandro fotoana fohy taorian'ny 3 hariva
Pegasus Airlines dia manasonia ny EASA COVID-19 Aviation Health Protocol
Mandeha sambo miaraka amin'ny mari-pamantarana orinasa nohavaozina ny Royal Caribbean Group
Ny Fikambanan'ny mpikarakara ny fizahan-tany Indiana dia namporisika ny mpikambana: vaksiny!
Misokatra indray ny fiaran-divay avy any Napa Valley amin'ny 17 Mey
Fanamby lehibe ho an'i Italia: ny Colosseum vaovao
Berlin sy tanàna hafa Alemanina vonona handray ireo mpitsidika GCC amin'ny 2021